Notakian ’ireo loholona hatramin’ny farany my hamerenana ao anatin’ny tetibolan’ny antenimieran-doholona ny vola mitetina 7 miliara Ariary izay voarakitra eny anivon’ny ministeran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola (MEF). Raha tsiahivina dia 23 miliara Ariary ny tetibola natokana ho an’ny antenimieran-doholona ka ny 16 miliara Ariary ihany no voasoratra ao anatin’ny PLFR (Projet de Loi de Finance Rectificative) 2020 fa ny 7 miliara ariary dia ao amin’ny MEF araka ny efa tapaka teo anivon’ny filan-kevitry ny Minisitra. Vokatr’izany dia nangatahan’’ireo loholona hatramin’ny farany ny famerenana io vola io ao anatin’ny tetibolan’ny antenimerandoholona. 14 no nandany izany omaly ary 10 no nitsipaka. Hiverina ho entina eny amin’ny Antenimieram-pirenena izany io volavolan-dalàna mahakasika ny tetibola nasiam-panitsiana io mialohan’ny hamoahan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenena ny didy hitsivolana mahakasika izany.